किन मुख्य सत्ता सर्त बन्दैछन् रेशम चौधरी ? – Suchana Sanjal
किन मुख्य सत्ता सर्त बन्दैछन् रेशम चौधरी ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७७ समय: २३:०३:३९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता गठबन्धन गर्न जनता समाजवादी पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनाएपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि चर्चामा छन् ।
कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ ।
त्यसैले सरकारलाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा बाहेक माग सम्बोधन हुने सम्भावना कानुनी दृष्टिले पनि न्यून छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र कित्तामा विभाजित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा छ र कुनै पनि बेला माओवादी केन्द्रको पहलमा अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ ।
त्यसैले उनी आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन एक मात्र अस्त्रको रुपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई रिझाउन खोजिरहेका छन् । त्यसको केन्द्रमा छन्, जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरी ।
जसपा नेताहरुका अनुसार तीनवर्षअघि सरकारलाई समर्थन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम लगायतका आन्दोलनकारीहरुको रिहाईसहितका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, मुद्दाको फैसला नभएको अवस्थामा पनि सांसद पदको सपथ दिलाउन चौधरीको पार्टी तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन छाड्ने चेतावनी दिनुपरेको थियो ।
अहिले त कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ ।
त्यहीकारण सरकारलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहमा रेशमको रिहाइ पूर्वसर्त बनेको जसपा नेताहरु बताउँछन् ।
टीकापुर घटनामा रेशम लगायतलाई दोषी ठहर गर्नु अधिकार र पहिचानको आन्दोलनलाई दण्डित गर्नु भएको मत राख्ने जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘जबसम्म नश्लवादीहरु शासकहरुको स्वार्थमा धक्का लाग्दैन, तबसम्म जनतालाई न्याय दिँदैनन् । यो पटक स्वार्थमा धक्का लाग्ने अवस्था छ ।’
प्रदेश विभाजनको विरोधमा थरुहट आन्दोलन चर्किएको बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो ।
सो घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । यसको भोलिपल्ट टीकापुर क्षेत्रमा थुप्रै थारु समुदायका व्यक्तिका घर जलाइएको थियो र सम्पति नष्ट गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रशासनले हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायतका नेताहरुलाई मान्यो ।
टीकापुरमा रेडियो र रिसोर्ट चलाइरहेका रेशम तत्कालीन सद्भावना पार्टीमा आवद्ध थिए ।
घटनापछि फरार भएका रेशम २०७४ को आम चुनावमा राजपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बने र ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित भए ।
वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिने प्रयास असफल भएपछि उनले १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसद पदको सपथ लिएका उनीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको सजाय सुनायो ।
उच्च अदालत, दिपायलले ३ पुस २०७७ मा केहीको सजाय उल्टी गरेपनि रेशमको जन्मकैदलाई सदर गर्‍यो । यसविरुद्ध परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसका लागि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको हुनुपर्छ । रेशमको हकमा सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन फिर्ता हुनुपर्छ वा अन्तिम फैसला आउनुपर्छ ।
त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेशमको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्न सक्छिन् ।
यो बाटो भने सहज नभएको अधिवक्ता पोखलेल बताउँछन् । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले कुनै कारण देखाएर यो मुद्दा फेरि जिल्लामा पठाउनुपर्छ ।
र, सरकारले अदालतसँग अनुमाति लिएर मात्रै मुद्धा फिर्ता लिनसक्छ । यो प्रक्रिया लामो हुने भएकाले जसपा नेताहरुले चाहेजस्तो तत्काल रेशम छुट्न सम्भव हुन्न ।
कुनै समय रेशमको मुद्दा हेरेका प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले मात्र सफाइ दिनसक्छ ।
त्यसको ‘ग्राउण्ड’ पनि छ । जिल्ला र उच्च अदालतको राय बाझिएको छ र घटना भएको बेला उनी घटनास्थलमा नभएको प्रमाणहरु पनि छन् ।’
राजपा वरिष्ठ नेता महतोले कुन प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने हो आफूहरुको विषय नभएको बताउँछन् ।
तर रेशमसहित जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरुको रिहा, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नभएसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘केपी ओलीको यही सरकारमा राजपालाई प्राथमिकताका साथ सहभागी हुने प्रस्ताव आएको थियो, तर हामीले यही सर्त राख्यौं ।
उसले पुरा गरेन र हामी सरकारमा गएनौं, उनी भन्छन्, ‘आज त सरकारलाई सहयोग चाहिएको छ । हाम्रो माग पुरा गर, सहयोग गर्छों । गरेन भने गर्दैनौं ।’
Last Updated on: March 12th, 2021 at 11:03 pm